T6-01 O3 "FireLight" (Small size 12,8cm) Tactical Advanced Professional Military Flashlight High lumen960 lm,Lighting range 100m, CREE XM L-T6 LED: Buy Online at Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
T6-01 O3 "FireLight" (Small size 12,8cm) Tactical Advanced Professional Military Flashlight High lumen960 lm,Lighting range 100m, CREE XM L-T6 LED
Product details of T6-01 O3 "FireLight" (Small size 12,8cm) Tactical Advanced Professional Military Flashlight High lumen960 lm,Lighting range 100m, CREE XM L-T6 LED
Battery Configuration: 18650, 3pcs AAA (not included)
ပြင်​သစ်​ အမှတ်​တဆိပ်​ အစစ်​အမှန် "FireLight T6-01".
ပို့လိုက်​တဲ့ပစ္စည်းမှဲာ့ကျွန်​​တော်​တို့ကုမ္မဏီရဲ့တံဆိပ်​မပါရင်​လက်​မခံပါနဲ့။ တစ်​ချိူ့ကုမ္မဏီ​တွေက ကျွန်​​တော်​တို့အ​ကောင့်​မှာရှိတဲ့ဝယ်​ယူအား​ပေးသူလိပ်​စာကိုအသုံးချပြီး အရည်​​သွေးညပုံစံတူပစ္စည်း​​ရောင်းချ​နေတဲ့အတွက်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
Specifications of T6-01 O3 "FireLight" (Small size 12,8cm) Tactical Advanced Professional Military Flashlight High lumen960 lm,Lighting range 100m, CREE XM L-T6 LED
Flashlight T6-01, 1*battery 18650, charger, pouch, bike holder, AAA battery holder, 18650 battery holder, Military plastic case.
Ratings & Reviews of T6-01 O3 "FireLight" (Small size 12,8cm) Tactical Advanced Professional Military Flashlight High lumen960 lm,Lighting range 100m, CREE XM L-T6 LED
by Ye T. Verified Purchase
nice service. fair price
by Thukha Z. Verified Purchase
This is very nice product and it works so well. I have been using for3months now and no errors.
Other questions answered by France Goods Export (4)
အရေ အတွက် ကို ဘယ်မှာ ရေးရမလဲ……??
အရှင် ဒ. -3weeks ago
ဆိုင် မှာတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြီးလာဝယ်လို့ရရင်လာဝယ်ချင်ပါတယ်၊ လိပ်စာနဲ့ဖုံးနံပါတ်ပြောပေးပါ၊
moe k. -3months ago
အော်ဒါမှာဖို့အကူအညီအဖြင့် မိတ်ဆွေကshop.com.mmရဲ့ hotline နံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 👉? ☎📞?၀ ၉၉၆ ၉၉၆ ၅၅ ၀၀📞? ☎ 9:30 am to 9:30 pm ( ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းရှော့ပင်နံမည် " FRANCE GOODS EXPORT " or Seller ID “MM102LD” ကိုဖော်ပြပေးပါ (တနင်္ဂနွေနေ့ ပိတ်တယ်။) အမျိုးအစား Code နံပါတ်က ------ This model "out of stock". New stock arrive on April
Where made in?
Kaung M. -5months ago
All people know that all flashlights (USA, European or Asian brands) are made in China. Like the iPhone, it also made in China but it is USA brand Apple. Firelight isaFrench brand controled at the factory 🏭? by French agents. There good or not good brands on the market. The customers have to choose. လူတိုင်းသိကြတာက USA,Europanနဲ့ asian brand အားလုံးက တရုတ်မှာထုတ်ကြတယ်ဆိုတာ USA Brand ကတော့ Iphone ပေါ့ ကျနော်တို့ fire light ကတော့ပြင်သစ်brand ပါ စက်ရုံကတော့တရုတ်မှာထားတာပါဈေးကွက်ထဲမှာ ကောင်းတာရောမကောင်းတာရော နစ်မျိုးရှိပါတယ် ဝယ်သူအနေနဲ့ ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်
France Goods Export - answered within 17 hours